Fikambanana Miezaka Mamerina ny Asan’Ireo Mpifindramonina Tany An-Tany Nialàny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Avrily 2017 4:59 GMT
Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 30 Martsa 2017 ity tantara avy amin'i Anna Boiko-Weyrach ity. Navoaka eto indray izany ho anisan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny Global Voices sy ny PRI.
Manana mari-pahaizana tany amin'ny oniversite ny ampahatelon'ny olona natera-bahiny tao Etazonia, tsy dia manana herijika loatra izy ireo mihoatra amin'ireo matihanina nateraky ny Amerikana (Etazonia) hiasa amin'ny sehatra tandrify azy, araka ny Ivontoerana momba ny Politikan'ny Fifindra-monina, izay miantso ny tranga ho “fahaizam-bery maina.” Miezaka ny hanova izany ny tambajotran'ny fikambanana iray.
Zava-dehibe ho an'ny vondrom-piarahamonina amin'ny ankapobeny sy ho an'ny mpifindra monina ihany koa ny fanampiana ireo tena matihanina voaofana avy any ivelany mba hiverina amin'ny sehatra mifanandrify amin'ny fahaizany, hoy i Liz Patterson, lehiben'ny Foibe Tongasoa Indray ao Washington Avaratrandrefana ao amin'ny Oniversiten'ny Vondrom-piarahamonina Edmonds akaikin'i Seattle. Iray amin'ireo foibe fanovozam-pahaizana miisa 11 any Etazonia izy io izay matetika hita any amin'ny vondrom-piarahamonin'ny Oniversite .
Nikaroka tari-dalana tany amin'ny Foibe Tongasoa Indray ao Puget Sound ao amin'ny Oniversiten'ny Highline atsimon'i Seattle i Mufrej. Tany amin'io toerana io, indray alatsinainy alina, vao haingana, nanomana ny fanadinana nasionaly hahazoana mari-pahaizan'ny mpanampy mpitsabo ny vondrona mpanampy mpitsabo misolo tena ny firenena samihafa tahaka an'i Ethiopia, Kazakhstan, Nepal ary Filipina .